Umnqweno wesondo oqhelekileyo kubambiswano
Ngaphantsi kwesondo, ubuhlobo obude
Khangela oko kukuzonwabisa kwabo bobabini ndawonye
Oko amajelo athengiswa ngeminyaka njengendlela yokuziphatha ngokwesini kubeka imibhangqwana phantsi koxinzelelo olukhulu. Ixesha lokurhoxisa le ngcinezelo yenkcazelo yezesondo ngokusetyenziswa kwefilimu, umsakazo kunye neTV.
Umnqweno wesondo oqhelekileyo
Ukungeniswa, ngeentsontelo, ebukhobokeni: Floral Isini kubonakala ukuba eseyiphantse ukungabikho ukususela Impumelelo kwihlabathi "amahlanu Izibuko of Grey".
Isondo eliqhelekileyo ngokwesondo
Xa version Hollywood iyaqhutywa, i abenentloni kwaye abangenamava Anastasia yokuqala ngokubeka isijorha ngokulinganayo njengoko Billionaire ezintle zamaKristu Grey, ngubani esazisa Anastasia kwilizwe iintlobo sadomasochistic.
Umxholo oyinkimbinkimbi usuqaliswe ngokuhlwa kwaye uye waba ngumqondiso wokuphila obuneliseko besondo ukususela kwisingeniso saso kwimarike ebanzi.
Ekubeni kunokuba alawule phezu queasy uziva omnye sele: xa kuziwa ekubeni nako ukubonisa ubomi ngesondo okwanelisayo, umntu kufuneka izenzo ngesondo eyaziwa sele wazama - okanye ubuncinane kumgxobhozo njengoko ezukisiwe kungena amaphepha, ukuba benze njani ifilim hero njalo ukugcina.
Usuku, ukuphuma kwimihla - apho ukhangele khona, ubona abantu banelisekile, imizimba ekhunileyo kwaye bagqibe ukulala ngesondo. Enyanisweni, inyaniso ihluke ngokupheleleyo: ngaphezu kwenkxalabo yokuphumla, umsebenzi kunye nendlu, kudla ixesha elincinci okanye umnqweno wokunandipha ngokuqhelekileyo, ngokwesondo. Kwakhona, iVorturnen enobukrakra oya kwiTV rhoqo i-vorgebetet, ngokuqhelekileyo ihamba ixesha elide.
Endaweni yezibini ezithandana ngesondo kunye nodlwengula phambi kwe-telly. Enyanisweni abaninzi bayazibuza: ngaba ulwalamano lwethu okanye ubomi bethu bobulili bubunzima kangaka? Ngaba enye iyakucasula umlingani wesini?
Abaphandi bezobudlelwane bezobudlelwane baseHamburg baye bafumanisa kwisifundo ukuba oku kuqhelekileyo kwaye akukho nto iyenzayo malunga nombane okhulayo. Ubuninzi ubudlelwane buhlala, izibini ezithandana kakhulu zihlala kunye.
Izibini ezitshatiweyo, ngokungakhathaliseki ubudala, zinomyinge wamaxesha e-10 ngenyanga yesini kunye nomnye. Abantu ababudlelwane bexesha elide benza njalo ngexesha elifanayo "kuphela" kwixesha le-4. Kuyamangalisa ukuba kusobala ukuba akunakucinge ukuba ubuhlobo sele sele buyiminyaka eyi-5 okanye i-25 iminyaka. Oku kubangelwa kukuba i-sexual nature changes in the course of relationship.
Uphando lwezenzo luyavuma ukuba, ngokukodwa kwinqanaba lokuqala lolwalamano, isondo sisetyenziswe njengesithintelo sokudibanisa abantu ndawonye. Xa ubude bubudlelwane obude buhlala, ngakumbi isondo sihamba kwimvelaphi - ezinye izinto ziya kugxininiswa. Ngokuqhelekileyo, ngoko, umbuzo uvela ukuba oko bekuya kulungile.
Ewe, kuya kufuneka kucace ukuba akuzange kube "oko" okwamanje. Kodwa yinyani ukuba ubomi besondo buguquka kwixesha lobuhlobo. Umbuzo wokuba umntu ufanele azame isikhundla esitsha senzekile.
Ukuziphatha ngokwesondo kufuneka kumnandi kubo bobabini
Ngokuqhelekileyo isihloko sibhekiselele kwi-erectile ye-dysfunction kunye nobume obusetyhini kunye nendlela yokujongana nayo. U-Lucky abo bantu banobungcali bentsapho abanokuzithemba ngokupheleleyo.
Ingongoma ephambili kukubona ukuba ubulili bomlingani ngamnye buhluke kulowo owawukhona ekuqaleni kobudlelwane. Ngokuqinisekileyo, oku kunokuba neenzuzo, kuba iingcali zithi ubundlobongela bubudlelwane obude, obuthetha "ubulili bomntu ngabodwa" ngendlela, uziphatha ngesondo esithandabuleyo.
Amaqabane kunye ukuze ufumanise uhlobo sex unika oko kubo inzaliseko kwaye bafuna ukuzama phandle kunye yintoni amaphupha neminqweno. zeetheraphisti Sex luxwayisa nxamnye abazidlayo ifakiwe maxesha kwemisinga ezininzi kakhulu ukusuka ngaphandle - oko kufanele babe abayimizekelo ezifana ngentla "amahlanu Izibuko of Grey" okanye imifanekiso engamanyala kuthethwane.
Oku kulula ukutsho kunokuba kwenziwe, ewe, kuba i-sex influences everyday person. Ngokuchanekileyo le ntsuku ephezulu yokuxhaswa kwezinto ezinobunzima obangela ukuba abantu babe phantsi kwengcinezelo yengqondo kunye nengqondo. Omnye unokuphela nje ukulahlekelwa ukuthelekiswa okusisigxina phakathi kwakho kunye nabathandwayo abaninzi abasuka kumajelo. Ngaba ukulala ngokwesini kufuneka ujabule? Akubonakali.
Ubundlobongela obunomdla obusebenzayo kubini abatshatileyo abavakalelwa kunye. Ezi zibini ziqhele ukufumana isondo sabo. Into ebalulekileyo kukuba uthetha omnye nomnye kwaye uthethe ngokunyanisekileyo oko kuhamba ngentloko yakho. Kucacile ukuba oku akusoloko kulula kumntu wonke.
Isidenge, akukho ulwimi olwaneleyo kwintsibano yesini kwimiba yethu, kuba akukho nkcubeko ehlakuleyo kule ndawo. Kumele kucace ukuba ubulili obuhle abukwazi ukuwa esibhakabhakeni. I-Eroticism ayikwazi kwaye ayisoloko iqhuma ngokukhawuleza njengentaba, nangona ihlala ibonakaliswe kwi-movie. Ubulili obufanelekileyo kufuna ukuba wenze into ethile kuyo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuseka ubomi bobulili ukuze ukwazi ukwaneliseka. Akusoloko kulula, kodwa kukho njalo indlela.
Ngesondo ngeshedyuli: Ukulindela ukuba ube ngokukhawuleza ugqithise kwaye uphelelwe yimpweno uxolelwe ukuthanda uthando. Abantu banamhlanje bacwangcisa kwaye basebenze yonke imihla yabo - ngoko kutheni kungabikho ngesondo? Ngokuqinisekileyo, oku kubonakala kungenasiphelo, kodwa inyaniso yokuba isondo esingaphelelanga libhetele ngakumbi kunokuba akukho isondo nakwezinye.
Intetho: Ukuqulunqa isicwangciso sokwenza utyando ngenkqu xa uthetha ngesondo kunokuthi kube yinto ekholisa ngayo. Njengokuba unalo isitya esifanayo kwisidlo sasemini imihla ngemihla, isondo silala embhedeni, ekugqibeleni siyakhathazeka kwaye sihlabe. Ukufumana iindawo ezintsha, ezinqwenelekayo zingabonwabisayo.
Ukuthatha ixesha kunceda: Ngelixesha nje imizuzu embalwa edlula kwiifilimu, de kube abachasi bancwina ngemikhonkco evulekileyo kwimilenze, ngokwenene kuyahluke - kwaye yinto entle. Okuthiwa "isondo esicothayo" senziwa ngokunyakaza, kodwa konke kunzulu. Umgangatho wesini ukhula ngokukhawuleza.
Ukuvulela into entsha: Ukuphefumlelwa okuvela kwiincwadi nakwiifilimi akufuneki ukuba kubi. Kubalulekile ukwenza into entle kuyo. Akufuneki ukuba zibophe, izibetho kunye nezibane ezivuthayo. Umzekelo, ungaqala ngokuqhagamshela amehlo akho. Kuxhomekeke kuzo zonke iintlobo zesini kuphela ukuba abathathu abathathi-nxaxheba bazive bekhululekile. Ngoko ukuba isondo silungile, kubalulekile ukuba akukho nanye iyakwamkelwa.